Wararka Maanta: Sabti, Feb 2 , 2013-Xukuumadda Somaliland oo wadda qorshe lagu gaarayo isku Fillaasho Dhanka Cunnooyinka ah iyo dhiiri-gellinta Wax-soo-saarka
Dr. Sacad Cali Shire waxa usoo jeediyey inay shacabku isticmaalaan cuntooyinka wadaniga ah ee dalkeena ka soo baxa si looga maarmo cuntooyinka dalkeena uga yimaada wadamada dibada, maadaama oo sannad kasta ay lacag aad u badani inaga baxdo inagoo dalkeena kala soo bixi karna cunta ay dadkeenu cunaan.
“Haddii aanu nahay xukuumadda Somaliland ee maanta talada dalka haysaa waxaanu wadnaa siyaasad ku saabsan qorshe ah in aynu wadan ahaan isku fillaansho xagga cuntada ariintaasina meel fiican bay noo maraysaa”ayuu yidhi wasiirka Qorsheynta Somaliland oo ka hadlayey kulan ay yeesheen ururka Beeraha oo soo bandhigayey dalagyo dalka laga beeray oo ka soo baxay, waxaanu intaas ku daray “Dalkeenu maanta waxa uu xagga cuntada iskaga filan yahay qiyaas ahaan 12.5%. heerkaasina runtii waa mid aad u hooseeya, haddana waxaad moodaa in aynaan u arkin dhibaato badan.”
Wasiirku waxa uu sheegay inay suurtogal tahay in dalalka ay cuntadda inooga timaadaa ay joojin karaan cuntooyinka aynu ka soo iibsano “Dunida maanta dadku aad buu ugu badanayaa. Dhulkii wax laga beeri jirayna aad buu u tayo daraayanayaa. Markaa waxa dhici karta in bari dhaw cunaha laysku qabto oo wadamada qaar yidhaahdaan waxba ma dhoofinayno, sidii uu ruushku bari dhawayd sameeyey oo uu yidhi qamandida dhoofin mayno.”
Wasiirku waxa uu shacabka Somaliland ugu baaqay in ay gacan ka gaystaan sidii ay dal ahaan horumar dhinaca wax soo saarka ah ugu talaabsan lahayn si aynu u gaadhno isku filnaansho xagga cuntada ah dhawaan.
Madaxweynaha Somaliland Mudane:Axmed Maxamed Maxamuud Siillaanyo ayaa isna arbacaddii toddobaadkan khudbaddii uu ka jeedinayey labadda gole Baarlamaan ee Somaliland, ayaa sheegay in la tijaabiyey cuntooyin badan oo laga beeray dalka, kuwaas oo si fiican uga baxay dalka, waxaanu soo jeedinayey inuu dhiirigalin doono wax soo saarka dalka.
“Wasaaradda Beeruhu waxa ay ku guulaystay in la dhamaystiro qorshe lagu tijaabinayay in Bariisku ka bixi karo dhulka Somaliland, taasi oo lagu guulaystay oo laga midho dhaliyay. Dalagyada kale ee la tijaabiyay waxa ka mid ah Tufaaxa, Cananiska, Muringaha, Mulukhiyada (morinda), Jiir-jiirka (rooket salad), Misirka, Faasuuliyada, Xulbada iyo Sagara xuudka”ayuu yidhi Madaxweynaha oo ka hadlayey wax soo saarka dalka iyo midhihii la tijaaabiyey ee soo baxay.
Madaxweynuhu waxa kale oo uu sheegay inay tabobaro siiyeen beeralayda dalka, mudo laba sano gudahooda, waxaana ka faa’iidaystay 2,000 oo beeralay ah oo bartay xirfadahooda wax beeriseed. Waxa kale oo tabobaradan barbar socday buu yidhi kormeero iyo kulamo kala duwan oo lagu dhiirigelinayo beeralayda Dalka, waxaana qalab kala duwan la gaadhsiiyay beeralayda, waxaana ka mid ahaa 10 cagaf oo qiimo jaban lagaga xaraashay beeraley ka kala socota Gobolada dalka oo dhan. Motoorro, ceelal, tuubooyin, dibi iyo qalab kale oo la gaadhsiiyay.
Waxa kale oo uu madaxweynuhu khudbadiisa ku sheegay in la qaybiyay 7 makiinadood oo kuwa shiida hadhuudhka ah, 3 makiinadood oo kuwa shiida bariiska ah iyo 1 makiinad oo nooca shiida saliida (Sinsinta).
Madaxweynuhu waxa uu sheegay in dalka laga hirgalyey Dhisme 16 xafiis ka kooban oo laga fuliyey xarunta wasaarada Beeraha, Dayactir lagu sameeyey dhismayaashii xarunta tababarada Aburiin, qaybana lagu kordhiyey, Dayactir iyo Dayr lagu sameeyey xarumaha wasaarada Beeraha ee Burco, iyo Gabiley.
Arrintan ayaa haddii ay xukuumaddu kaga dhabayso noqonaysa faa’iiddo, maadaama oo imika ay dadweynuhu aad u isticmalaan cuntooyinka dalka ka baxa oo habeenkii inta badan aad arakaysid hudheeladda cuntooyinka wadaniga lagu sameeyo oo aad looga buuxo, taasina waxay cadaynaysa in dadku soo jeclaanayaan inay isticmaalaan cunto wadaniga.